Dhibaatooyinka is biirsaday: Corona ee aagagga iskahorimaadka - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
August 15, 2020 Warar & Muuqaal 0
Sakena Yacoobi, oo ah agaasimaha guud ee machadka barashada Afgaanistaan, lana shaqeysa dhalinyarada. (Sawir: AIL)
Hordhaca tifaftirayaasha. Qoraaladii hore ee taxanaheena Corona Connections waxay inta badan diirada saareen cadaalad darada iyo cillad xumada dhismayaasha caalamka oo si aan la inkiri karin u cadeeyay faafida. Qodobkaan, waxaan ugu yeeraynaa barayaasha nabada xaqiiqda COVID waxay kadhigtay inbadan oo kamid ah cadaalad daradaas mid daran.
"Faafidaan wuxuu saameyn xun ku yeeshay meeshii markii horaba ahayd xaalad aad u xun." - Sakena Yacoobi, Maamulaha Guud, Machadka Afqaanistaan ​​ee Barashada
Xubin firfircoon oo waqti dheer ka tirsan shabakadaha IIPE / GCPE, Sakena Yacoobi waxay bilawday shaqadeeda waxbarista haweenka reer Afgaanistaan ​​ee ku jira xeryaha ay ka magan galeen Taliban. Sanadihii laga soo bilaabo markii la keenay shaqada Afgaanistaan, iyada oo loo marayo Machadka Waxbarashada Afgaanistaan ​​(AIL), waxay abuurtay barnaamij waxbarasho oo dalka oo dhan ah kaasoo wax ka beddelay nolosha kumanaan kun. Xitaa iyada oo loo marayo rabshadaha iskahorimaadyada sokeeye, shaqadu way sii socotaa, welina waa socotaa.
Si kastaba ha noqotee, sida laga arki karo warqaddeeda deeq-bixiyeyaasha (hoos ayaa lagu soo saaray, warqadda asalka ah waxaa laga heli karaa halkan), shaqadaas waxaa si qoto dheer u saameeyay COVID-19. Shaqada AIL si weyn ayaa loo badalay si ay u bixiso adeegyada uu u baahan yahay faafa, laakiin ma aysan bixin dowlada. Xaaladda Sakena iyo AIL ay wajahayaan waxaa loogu talagalay ururada bulshada rayidka ah ee adduunka; Meel kasta, sida xubin shabakad ka mid ahi dhowaan qortay, "dawladda ayaa curyaan ah." Baaragaraafka shanaad ee warqadda, oo laga soo qaatay xigashada kor ku xusan, ayaa soo koobaya xaaladda, kaliya ma ahan Afgaanistaan, laakiin ummadaha kale ee ay ka jiraan khalkhalka sokeeye iyo hufnaan la'aanta, dawladaha aan masuulka ka ahayn ay ku fashilmaan dadkooda. Adduunyada oo dhan, bulshada rayidka ah, sida AIL oo kale, waxay ku dadaashaa, iyadoo aan haysan dhaqaale ku filan, oo ay la soo dersaan caqabado badan oo dhinac walba ah, si ay ula wareegaan mas'uuliyadda taageeridda dadka halka ay dowladuhu ku fashilmaan.
AIL waa kiis cad oo qeexaya baahida loo qabo mas'uuliyadda muwaadiniinta ee u gaarka ah bulshooyinkooda, iyo waxbarashada si ay ugu suurtagasho inay la wareegaan. Halkaas ayay ku jirtaa rajada ugufiican ee bulshada adduunku ku gaadho xaalad caadi ah taas oo lagaga adkaaday cadaalad daradii qaabdhismeed iyo dhibaatadii kajirtay cudurka caadiga ah ee safka hore. Anaga oo ah barayaasha nabada, anaga, dhib malahan xaalada ay kujiraan umadaha kaladuwan, waxaa naga go'an fulinta baahidaas. Hadday u adkaysato mid ka mid ah Corona xaaladahan muhiimka ah ama haddii kaleba, waxaan la midownay kuwa sida Sakena oo kale ee xaaladdaas ku jira, waxaanna ku qaban doonnaa shaqadeenna waxbarasho ee u gaarka ah ruuxa iyo aragtidaas.
Warqad Sakena Yacoobi ah
Agaasimaha Guud, Machadka Afqaanistaan ​​ee Barashada
Waxaan rajeynayaa in warqadani ay adiga iyo kuwa aad jeceshahayba ay gaarto adiga oo nabad qaba oo caafimaad qaba. Waxaan ogahay inay waqti dheer ahayd tan iyo markii aan si toos ah aan kula soo xiriiray maadaama aan badanaa si joogto ah u socdo. Jadwalkaygu wuxuu ahaan jiray socod joogto ah oo aan ugu safro ama aan ku dhexjiro aqoon isweydaarsiyo, shirar nabadeed, dhacdooyinka hadalka, iyo aqoon isweydaarsiyo caalami ah. Xaqiiqdii, bil uun ama wixii ka hor, waxaan u safrayay Mareykanka oo ka imanayay Afgaanistaan ​​kulan. Si kastaba ha noqotee, sida adduunka intiisa kale, waxaan ku dhammaaday dhul waxaana ku xayiray halkan anigoo aan ku laaban karin Afgaanistaan ​​sababo la xiriira aafada adduunka oo aan dhammaanteen la kulanno.
Markii aan halkan fadhiyo gurigeyga oo aan dib u milicsado waqtigeygii oo dhan ee aan ku qaatay kor u qaadista iyo la hadalka kumanaan dad ah oo ku hadlaya magaca AIL iyo dadka reer Afghanistan, ma caawin karo laakiin waxaan dareemayaa inaan u xiisay ku xirnaashaha deeq bixiyeyaasha heer shaqsiyadeed. intii aan jeclaan lahaa. Waan ogahay inaad ku maal gashatay barnaamijkan shucuur ahaan iyo dhaqaale ahaanba, runtiina waxaan kuugu tixgelinayaa inaad lammaane la noqoto dadaalkeenna aan ku caawinno dadka reer Afghanistan.
Saaxiib ahaan, waxaan rabaa inaad ogaato in Afghanistan ay wali la tacaaleyso khilaaf joogto ah. Si kastaba ha noqotee, AIL way sii socotaa si xowli ah waxayna si dhakhso leh ugu faafisaa iftiinkeeda gobol kasta oo dalka ka mid ah. Bulshada AIL waxay u heellan yihiin oo ay jecel yihiin inay ku horumariyaan nolosha dadka reer Afghanistan xagga waxbarashada. Waxaan si gaar ah diirada u saareynaa xoojinta haweenka iyo gabdhaha si aan gacan uga geysano qaabeynta mustaqbal wanaagsan Afghanistan waxaana aad ugu faraxsanahay natiijada dadaalkeena. Caawinta AIL iyo taageeradaada, haweenku waxay badalayaan noloshooda. Waxay ugu dambayntii helayaan fursad ay ku sii wataan tacliinta sare, helaan shaqooyin waara oo bixiya mushahar wanaagsan, waxayna gacan ka geysanayaan qaabeynta siyaasadda ugu dambayntii ka caawin doonta dib-u-dhiska dalka.
Xitaa iyada oo leh dhammaan horumarka ay AIL sameysay sanadaha oo dhan, weli waxaan haysannaa safar dheer oo naga horreeya, mid nooga baahan in aan waqti iyo dadaal badan gelino… Intii lagu gudajiray cudurkan faafa COVID-19 wuxuu ku dhufanayaa ummad kasta wuuna curyaaminayaa dhaqaalaha. Sidaad qiyaasi karto, waddamada dunida saddexaad, sida Afgaanistaan ​​oo kale, waxaa ku dhacay dhibta ugu daran.
Aafadan ayaa saameyn xun oo ba'an ku yeelatay wixii markii horaba ahaa xaalad aad u xun oo ka jirtay Afghanistan. Kaliya maahan Afghanistan inay la tacaaleyso kacdoonka shacabka iyo dagaalada ka socda wadanka gudihiisa, waxaan hada lumineynaa dad aad iyo aad u tiro badan oo viruska ah Ammaanka ayaa weli ah mid ka mid ah arrimaha ugu waa weyn iyadoo saboolnimada dhammaan Afghanistan ay sii kordheyso. Iyada oo waddanku xiran yahay, kumaan kun oo dad ah oo markii horaba shaqaale ka ahaa, hadda ma haystaan ​​awood ay ku shaqeeyaan oo ay ku quudiyaan qoysaskooda. Shaqaalaha muhaajiriinta ah ayaa ku soo qulqulaya dalka iyaga oo ka imanaya xuduudaha Iran iyo Pakistan kumanaan kun. Tani waxay sii xumeyneysaa xaalada maadaama inbadan oo dadkan kamid ah ay qaxooti yihiin oo ay wataan viruska. Ma hayaan meel ay aadaan oo ay caawimaad ka helaan.
AIL ahaan waxaan isku helnay meel ay dadka reer Afgaanistaan ​​na soo eegayaan oo ay nagu tiirsan yihiin. Sanadihii la soo dhaafay, waxaan soo saarnay sumcad ah in adeeg tayo leh aan u fidino qof walba iyada oo aan la takoorin. In kasta oo ay dawladdu amar ku bixisay in dhammaan dugsiyada iyo barnaamijyada la xidho, haddana AIL waxay aqoonsan tahay in dadku weli baahi weyn u qabaan. Waxaan ogeyn tallaabo loo baahan yahay in la qaado si looga caawiyo dagaalka ka dhanka ah COVID-19 sidaas darteedna waxaan ku dhufannay dhulka socda. Marka hore, si gacan looga geysto joojinta faafitaanka fayraska, waxaan ka hor istaagnay macallimiinta iyo ardayda labadaba inay jir ahaan ka qaybgalaan barnaamijyadeenna waxaanna labanlaabnay tirada beddelaadda 6-da xarumood ee caafimaadka. Marka xigta, waxaan bilownay qaybinta dhammaan noocyada cuntada ee kuwa aadka u baahan - gaar ahaan haweenka, carruurta, iyo waayeelka. Ka dib, waxaan u wareejinay diiradeena dib u dhiska xarumaheena sida tas-hiilaad wax soo saar oo hada soo saaraya wejiga wajiga, gaashaanka wajiga, iyo goono difaac ah.
AIL waxay leedahay oo ay sii wadaa inay uqeybiso kumanaan unug oo ah qalab ilaalin shaqsiyadeed rugaha kala duwan, isbitaalada, xafiisyada dowlada, iyo guud ahaan bulshada. Qiimaha alaabtaan waa mid aad u badan oo dadku awoodi kari waayeen inay iibsadaan xitaa haddii laga heli karo waddanka. AIL sidoo kale waxay adeegsaneysaa idaacad u gaar ah, Radio Meraj, si ay si guud ugu baahiso muhiimada kala fogaanshaha bulshada, gacmo dhaqashada, iyo wejiga wejiga la gashado dad aad u fara badan. Waxay sidoo kale baahisaa farriimaha qeybinta cuntada iyo macluumaadka ku saabsan sida loo ilaaliyo nadaafadda iyo nadaafadda goobaha.
Sababtoo ah COVID-19, deeq-bixiyeyaal badan ayaan wax jawaab ah bixin ama ka laba-labayn maxaa yeelay waxay u maleynayaan in barnaamijyadeennu ay xiran yihiin. Laakiin waxaan hadda kuu sheegayaa, barnaamijkeennu wuxuu wadaa laba jibbaar, dhammaan shaqaalaha maamulka AIL waxay ku sugan yihiin halkaas oo ay ka shaqeynayaan jiidaha hore, iyagoo khatar gelinaya naftooda iyo caafimaadkooda shaqsiyeed maalin kasta. Intaas oo dhan, in kasta oo albaabbada fasalkeennu ay xiran yihiin, haddana kama aanan quusan hadafkeenna oo ah inaan waxbarashada gaarsiinno haweenka iyo carruurta reer Afgaanistaan. AIL waxay si isdaba joog ah u cusbooneysiineysaa una diyaarineysaa agabyada waxbarashada masaafada ee carruurteena kuwaa oo xoogaa marin u leh taleefannada casriga ah ama kombiyuutarada. Laakiin xaqiiqda ayaa weli ah in 85% ardaydeena ay ku seegayaan waxbarashadooda xiritaanka dartiis. Si tan loo waafajiyo, waxaan abuurnay baakado guryaha lagu qaato oo ay heli karaan ardayda si ay uga soo qaataan ugana shaqeeyaan guriga. Intaas waxaa sii dheer, waxaan u samaynay khadka tooska ah ee macallimiinta si ay ugu jawaabaan ardayda haddii iyo / ama marka waalidkood aysan ka caawin karin shaqadooda guriga.
Nasiib darro, waxaa na soo gaaraya warbixino aad iyo aad u badan oo ku saabsan rabshadaha ka dhanka ah haweenka iyo carruurta ee guriga sababtoo ah xirnaanshaha iyo waqtiga dheeriga ah ee lagu wada qaatay hal saqaf hoostiisa. Tan iyada oo laga jawaabayo, AIL waxay leedahay la-talin dejin si ay uga caawiso waalidiinta iyo carruurta inay la qabsadaan xaaladahaas uu xiritaanka u weynaaday. Waxaan sidoo kale u adeegsaneynaa baraha bulshada qaab aan ku siineyno macluumaad ku saabsan sida loo sabro, loo wadaago kheyraadka, looguna dhaqmo kala fogaanshaha bulshada.
Uma diyaar garoobin cudurkan faafa. Midkeenna ma ahayn. Nasiib darrose, dad badan ayaan u qaadanaynin fayraskan halista ah sidaa darteedna, kumanaan iyo kumanaan ayaa qaadsiinaya. Tirada kiisaska ayaa sii kordheysa oo dowladdu waxbadan kama qabanayso caawinta. Sababtaas awgeed, ayay muhiim u tahay AIL inuu sii wado bixinta gargaarka tooska ah iyo ka warqabka viruskan dadka reer Afghanistan.
Waan ogahay in qaar badani rafaadsan yihiin, laakiin waddan sida Afgaanistaan ​​ah sinnaba diyaar ugama ahayn inay tan wax ka qabato. Waxaad cadeysay inaad tahay lammaane naxariis badan sanado badan waligoodna ma hilmaami doono deeqsinimadaada. Taageerada iyo naxariista deeq-bixiyeyaasheena waa laf-dhabarta ururkeenna waana tan ugu weyn ee naga caawineysa inaan dhameystirno himiladeenna, gaar ahaan xilliyadan oo kale. Aniga iyo AIL labadaba si kal iyo laab ah ayaan u qadarin doonaa, sidii aad noogu taageerteen waqtiyadii hore, haddii aad dib uga fiirsan doontaan maalgelinta dadaalkeenna inta lagu jiro xilligan dhibaatada. Haddii xaaladdaada hadda aysan kuu oggolaanayn inaad na taageerto sidii aad sannadihii horeba noo taageeri jirtay, qaddar kasta ha noqotee weli waxay noqon doontaa gargaar aad u weyn oo ay si qoto dheer u qadarinayaan bulshada Afgaanistaan. Haddii aan ku sii socono orodkeenna hadda, iyada oo aan la helin taageero dheeri ah, waxaa nagu qasbanaan doonta inaan joojino dadaallada gargaarka iyo barnaamijyada aan sida aadka ah uga shaqeyneyno sii wadida iyo socodsiinta.
Aniga oo ku hadlaya magaca haweenka iyo carruurta reer Afghanistan, waxaan rabaa inaan kaaga mahadceliyo dhammaan naxariistaada, naxariistaada, iyo naxariistaada. Sida Rumi u yidhi, "Inta badan ee aad wax siiso, wax badan ayaad ka helaysaa barakooyinka xagga Eebbe". Qalbigayga hoostiisa, waad ku mahadsan tahay waqtigaaga, waxaanan sii wadi doonaa inaan ku tukado caafimaad iyo farxad adiga iyo kuwa aad jeceshahayba. Alle markasta ha kugu barakeeyo naxariistiisa.
Abuuritaanka Rajada Caalamiga ah
Machadka Afqaanistaan ​​ee Barashada
# goobaha isku dhaca
#barashada isku dhaca
122 acciones fáciles (y difíciles) para la paz / 122 ficil fudud (iyo adag) oo nabada ah
Kaqeybgalka Qoyska ee Buug-hawleedka Waxbarashada Nabadda
April 15, 2020 Warar & Muuqaal 0
Dadku waxay u barooranayeen luminta waxyaabo badan: dhaqdhaqaaqa, xakamaynta, amniga shaqada, nabadgelyada maskaxda, iyo kuwo kale. Waxaan si wada jir ah ugu barooranaynaa luminta waxqabadka caadiga ah waana ka murugoonay hubanti la'aan ay tani keento. Lataliyaha murugada, Cathy S. Babao, MA ayaa nagu martay nidaamka baroor-diiqda iyo sida aan u maarayn karno.
Sheeko laba fayras ah: Nolol lumay, Fursad lumay iyo fursad rajo leh
June 5, 2020 Warar & Muuqaal 0
Isku-xirka Corona, oo ay dhiirrigelisay maqaal ay soo saartay Nancy Sylvester, ayaa ku martiqaadaya milicsiga laba fayras: COVID-19 iyo cunsuriyad. Marka hore, maxaan ka baran karnaa naxariista iyo adkaysiga Dr. Anthony Fauci? Ta labaad, maxaa laga baran karaa fayraska sida xanuunka badan u soo ifbaxay ee cunsuriyada ee ku dhacay anshaxa suuban ee dalkeena tan iyo markii uu ka soo bilawday? [sii wad akhriska…]
Xiriirinta Corona waxay sii baareysaa dhibaatada aadanaha ee kuwa ugu nugul ee ay soo rogeen qaab-dhismeedka dhaqaale ee adduunka ee aan caddaaladda ku dhisneyn ee COVID-19 ay muujineyso oo ay sii xumeyneyso, waxayna sii baareysaa lagama maarmaanka iyo wax ku oolnimada waxqabadka degdegga ah iyo kan maxalliga ah markay dawladuhu ku guul darraystaan ​​inay wax ka qabtaan [sii wad akhriska…]